OGAALKA SOOMAALI-WEYN.Q6AAD.W­­­/Q C/NAASIR GURAY MEECAAD. |
OGAALKA SOOMAALI-WEYN.Q6AAD.W­­­/Q C/NAASIR GURAY MEECAAD.
Nadaamkii Xamar ka dhismey ee Talyaaniga uu hoggaanka u hayay, muddo dheer kuma ayan qaadan in uu muquuniyo qabaa’ilka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Banaadir. Waxaa sidaas u sahlay awooddii dowladda Talyaaniga ee la daba-taagneyd taakulada iyo saadka joogtada ah. Isla-xilligaas uu culeyska ku hayay Banaadir, maamulkii gumeysiga wuxuu gacanta ku hayay qorshihii uu kula wareegi lahaa meelaha u hadhay oo Soomaaliya kamid ah, ee uusan weli gaadhin xukunkii gumeysiga. Meelahaasi waxay ahaayeen degaankii ay ka talinayeen labadii imaaradood ee ka dhisnaa Mudug iyo Majeertiinya. Qorshaha Talyaaniga uu diyaariyay kiisa ugu waynaa wuxuu ahaa ciidamo uu ku ururshey gobolka Hiiraan. Wuxuu ugu tala-galay, haddii ay is-dhiibaan iyo haddii ayan is-dhiibin, mid ay ahaatoba in ciidamadiisan ay gaadhaan degaanka ay ka taliyaan Boqor Cismaan iyo Suldaan Cali Yuusuf.
Cesare Maria De Vecchi, tallaabooyin dhowr ah ayuu qaadey oo uu ku doonayay in uu kula wareego gobollada Soomaaliyeed ee gacantiisa ka maqan. Tallaabadii ugu horeysey ee uu qaado waxay ahayd socdaal uu ku tegey degmada Hobyo. Markey taariikhdu ahayd 24/ 3- 1924-kii, ayuu degmada wuxuu kula kulmey Suldaan Cali Yuusuf. Wuxuu u sheegey in uu doonayo in saldanadda uu suldaanku ka taliyo ay si buuxda u hoos timaaddo maamulka Imbriyaaliga ah ee Xamar fadhiya. Suldaankii waa uu diidey arinkii uu De Vecchi ula-yimid. Wuxuuna u sheegey in arinkaasi uusan ahayn mid suuragal ah. De Vecchi, wuxuu ku soo laabtay Xamar isaga oo ay u go’an tahay go’aankiisii weerarka ahaa.
De Vecchi, tallaabadii labaad wuxuu qaadey bishii xigtey oo ahayd abriil 1924-kii. Isagu wuxuu markaas Caluula u direy ergey Talyaani ah. Kaasi wuxuu ahaa E. Coronaro oo horey u ahaa ninka u kala ergeeya labada maamul. E. Coronaro, socdaalkiisa markan ah, waa uu ka duwanaa kuwii uu horey u galay ee uu kula xidhiidhi-jiray boqortooyada Majeertiinya. Markaan ujeeddadiisu waxay ahayd sahan iyo basaasnimo. Waajibka la soo siiyay wuxuu ahaa in uu keeno ogaallo hor-dhac ah ee loo adeegsado dagaalka lala damacsan yahay deegaanka iyo maamulkiisa. Inkasta oo xidhiidhka Talyaaniga uu la lahaa boqortooyadii Majeertiinya ay xilligaas nus qarni ku dhoweyd (40 sano), misana Talyaanigu wax aqoon ah uma uusan lahayn deegaanka iyo dhismihiisa. Waxaa jiray qorshe horey uga socdey gobolka oo ay is-waafaqeen sahanka E. Coronaro. Wuxuu ahaa, nin aqoonyahan Talyaani ah oo deegaanka ka wadey howl dhul-barad ah (Geological Survey). Ninkaasi waxaa la odhan jiray Stefani Puccioni. Isagu wuxuu gobolka ka wadey howl uu ku masaxayo dhulka oogadiisa, si loo ogaado qaab-dhismeedka uu dhulka gobolku leeyahay.
E. Coronaro, fursad ayay u noqotey in uu la socdaalo ninkaas dhulkii gobolka baranaya. Xogtii uu soo heley wuxuu ku soo ururshey, in nolosha degaanku ay ku xidhan tahay ganacsiga cari-edeg. Gaar ahaan gaadiidka badda oo u kala goosha gacanka Caddan labadiisa dhinac (geeska Afrika iyo Khaliijka Carabta). Qoraalkiisii wuxuu ku xusey, haddii halkaas laga cuna-qabateeyo, iska-caabin kasta oo ay isaga difaacayaan weerar lagu qaado, wuxuu noqonayaa mid tabar-daran. Guddoomiyihii Xamar Cesare Maria De Vecchi, markii uu heley khabarkan guul ayuu u arkey. Sidaa darteed wuxuu ku deg-degey in uu qaato go’aankii dagaalka. Markiiba wuxuu ku dhiiradey in uu ku tallaabsado qorshihiisii 1-aad ee weerarka. Wuxuu soo saarey xeer uu labada saldanad kaga dhigayo hubka.
Boqor Cismaan Maxamuud iyo Suldaan Cali Yuusuf, isku mar ayay soo gaadhey fariinta ah in ay hubka dhigaan. Laakiin labaduba waa ay diideen. Iyagu waxay markaas cuskanayeen heshiiskii ay horey ula dhigteen Talyaaniga oo ahaa mid aanan dhaafsiisneyn heshiis dul-maamul. Sida la ogsoon yahay, heshiis kasta oo la dhigto, fulintiisa iyo jebintiisa waxay ku xidhan tahay, labada dhinac midkooda xoogga leh, hadba sida uu u arko maslaxaddiisa. Talyaanigii wuxuu markaas go’aansadey in uu jebiyo heshiiskii uu horey ula dhigtey labadan maamul. Boqorka iyo suldaanka markii ay ogaadeen go’aanka Talyaaniga, waxay bilaabeen in ay is-dhaafsadaan fariimo ay ku wada-hadlayaan. Laakiin wakhti ku filan ma ayan helin oo khilaafka u dhexeeyay ayaa wuxuu ahaa mid muddo soo jiray tan iyo labadii nin ee xilka kaga horeeyey (Boqor Nuur Cismaan iyo Suldaan Yuusuf Cali).
Saldanadda Hobyo waa ay ka duwaneyd midda Majeertiinya, xagga dhismaha iyo xagga joqraafiga. Xuduuddeeda koonfureed waxay ahayd Ceel-dheer iyo Dhuusa-mareeb. Xadka galbeedka wuxuu ahaa Gallaadi iyo War-dheer. Bariga waxay xeeb ku lahayd Bad-waynta Hindiya. Waqooyiga waxaa xuduud u ahaa togga Nugaaleed qeybtiisa bari. Waxay halkaas isku heysteen dowladdii Boqor Cismaan uu odeyga ka ahaa. Waxaa kaloo jiray nadaamka Hobyo ka dhisnaa in uu ahaa mid midabyo leh oo dadkeeda aanan ku ekeyn beelo ab-saxan wadaaga. Xoogagga saldanaddan ku bahoobey ayaa qaarkood magaca Soomaali wax ka hooseeya oo ay isugu yimaadaan ayan jirin. Kala duwanaanshaha beelaha ay u talisey, waxay ahayd midab kamid ah midabyada ay kaga duwaneyd maamulkii Majeertiinya ka dhisanaa. Xuduuddaas ay saldanaddu la lahayd maamulkii Talyaaniga ee koonfur ka soo foofayay, ayaa waxay khasbeysey in maamulka Hobyo uu noqdo midka uu qabsanayo weerarka hore ee fashiistada.
Bishii july 1925-kii, De Vecchi tallaabo saddexaad ayuu qaadey markii uu dhambaal u direy suldaan Cali Yuusuf. Wuxuu ugu sheegey in uu Hobyo u soo magacaabay nin Talyaani ah. Suldaan Cali, mar kale ayuu diidmo kaga jawaabay dhambaalkii guddoomiye De Vecchi. Markey arintaasi dhacdey, suldaankii wuxuu dhambaal u direy Boqor Cismaan Maxamuud oo fadhigiisu ahaa Baargaal. Cali Yuusuf waxaa u muuqatey arintan uu Talyaanigu wado, in ay tahay mid lagu illaawi karo wixii khilaaf ahaa oo dhex-yiil isaga iyo Boqor Cismaan. Sidaa darteed, suldaanku damaca De Vecchi ayuu u arkey in ay tahay fursad leysugu soo dhoweyn karo aragtiyaalkii ay isku diiddanaayeen labada maamul. Isagu wuxuu dhambaalkiisaas ku muujiyey codsi ah in isaga iyo Boqorka ay mideeyaan ciidamadooda. Sidaasna ay kaga hor-tagaan is-ballaadhinta maamulka Talyaaniga. Nasiib-darro waraaqdii suldaanku diray, waxay gacanta u gashay Talyaaniga oo waxaa loo geeyey De Vechhi. (The Collapse of the Somali State: The Impact of the Colonial Legacy, Abdisalaam Issa Salwe. 1996. London -UK).
Guddoomiye De Vecchi, qorshaha uu ku qabsanayay gobollada bariga iyo bartamaha ee Soomaaliya, wuxuu ku howlanaa muddo laba sano ah. Isagu wuu ogaa in diidmo ka iman karto midkood ama labada saldanad ee Soomaalida uga dhisneyd Mudug iyo Majeertiinya. Sidaa darteed wuxuu sii diyaarsadey ciidan saddex guuto ahaa oo saddex af leh. Waxay ka koobnaayeen 1.500 oo nin iyo hub ka xoog wayn kan ay Soomaalidu siteen. Waxaa xusid mudan, sida maantaba hubka looga cuna-qabateeyey Soomaaliya, in qodobadii heshiiskii Berliin ay kamid ahaayeen kuwo looga reebayo in qaaradda Afrika la geeyo hub laga ganacsanayo. Sidaa darteed ma jirin hub xooggan oo soo gaadhi-karey gacanta Soomaalida.
Dhambaalkii ay boqorka iyo suldaanku is-dhaafsadeen, dareen ayay ku abuurtey De Vecchi iyo maamulkisii. Sidaa darteed, markay taariikhdu ahayd 1/ 10- 1925-kii, Cesare Maria De Vecchi, wuxuu qaatey go’aankii kama danbeysta ahaa ee la xidhiidhey weerarka labada saldanadood iyo la wareegidda maamullada halkaas ka dhisan. Toddobaadkii ugu horeeyey bisha, waxaa xeryahoodii ka baxay ciidamadii iyo qalabkii loo diyaariyay in ay dagaal ku qaadaan degaanada ugu sokeeya ee ah degmooyinkii looga talinayay Hobyo. Ciidamada u dirirayay Talyaaniga waxaa la odhan jiray Zaptiè Corpo. Iyagu waxay la jaad yihiin ciidamada Talyaaniga ee la yiraahdo Carabinieri. Waxaa xusid mudan, Imbraadooriyadda Talyaaniga ciidamadii ka joogey Liibiya iyo Ereteriya, qudhoodu waxaa la odhan jiray Zaptiè.
Suldaan Cali Yuusuf, markii uu ogaadey in maamulkiisii duulaan lagu soo yahay, wuxuu shiriyay odeyadii barlamaanka u fadhiyay. Wuxuu hor-dhigey su’aal uu ku weydiinayo sida ay u arkaan xaaladdan la soo deristey saldanadda, ee ah laba daran mid dooro. Ama weerar ay arkayaan in ay ku jabayaan, ama is-dhiib ay arkayaan in ay ku gumoobayaan. Cimilada ay xilligaas ku sugneyd siyaasadda saldanaddu, waxay ahayd mid aanan u hiilineyn in ay weerar la galaan xoogga Talyaaniga. Siyaasaddii Suldaan Cali Yuusuf oo ahayd mid ka dhaqan duwan siyaasaddii aabihiis, ayaa waxay dhalisey, maamulkiisii in ay la colloobaan qabaa’ilkii laf-dhabarka u ahaa oo badankoodu ay ahaayeen qabaa’ilka Daaroodka ah ee ku dhaqan gobollada dhexe. Waxaa kaloo Suldaan Cali la colloobey rag maqaawiir ah oo ama muqaddimiin (saraakiil) ahaa ama naa’ibyo ka ahaa degmooyinka amaba kamid ahaa raggii siyaasadda la waldaaminayay. Tusaale-dhigga raggaas waxaa kamid ah Cumar Samantar (muqaddim), Xirsi Guushaa (muqaddim), Maxamuud Maxamad Goda-gode (guddoomiyihii Ceel-buur) Cismaan Sharmaarke (suldaanka ina-adeerkiis), Axmad Xasan Maxamuud oo ku magac dheeraa Axmad- Busur (guddoomiyihii Gaalkacayo). Taggaan iyo kuwo kale oo dhiggooda ahaa, xilligaas waxay si cad uga soo hor-jeedeen hoggaanka saladanadda.
Axmad-Busur oo isaga qudhiisu ay suldaanka ilma-adeer ahaayeen, ayaa markuu la colloobey suldaanka uu degaankii uga qaxay. Gabey uu tiriyay ayaa jiray oo uu ku tilmaamayo, xilkii uu hayay in uu tabasho darteed kaga tegey. Wuxuu intaas raacinayaa in uu degaanka ka guurayo oo ka fogaanayo. Tixihii uu tiriyay waxaa kamid ahaa:
§ Nin la julugey Nuurow Rabbaa jid u banneysiine
§ Isba jihadi waa buux nimuu rabo jaliilkeeye
§ Jilib iyo Jamaamaan u kicin jooshka maanta ahe
§ Haddaan malagu jeenyaha i qaban waan jareysnahay
§ Jubba-yinkaaba waan qaban halkaan jeer aqoon jiraye (Axmad Busur).
Khilaafkaas muuqdey ayaa wuxuu sabab u noqdey, odeyaashii ku hadhay saldanadda in ay Suldaan Cali kula taliyaan in uu is-dhiibo. Inkasta oo suldaanku uu doonayay in uu ku dagaalamo wixii ciidan ah oo uu heli karey, misana duqeydii ag-joogayaashiisa ahaa waxay ku adkeeyeen in aanan la diririn oo leys-dhiibo. Iyagu waxay hor-dhigeen suldaanka sabab adag oo ah, ciidanka Hobyo fadhiya xoog ka baxsan oo xilligaas saldanadda u daacad ahaa in uusan jirin. Nuxurka taladii odeyaashu waxay ahayd:
“ Ma dagaalami karno oo ciidan xooggan oo inoo dagaalama ma heleyno. Qabaa’ilkii waa nagu kacsan yihiin. Ciidamadii badankood waa naga gadoodeen. Gabeygii ha’leyda ahaana waa inagu maqan yahay. Sidaa darteed beelihii degaanka ku dhaqnaa, ka heli-meyno beel inoo dirirta “. (Waxaan ka soo xiganey Cali Yuusuf Maxamuud – Cali-Islaan. 16/ 2- 2008. Masar – Qaahira).
Gabeygan ha’leyda ah oo odeyaashu xuseen, sheeko ayuu leeyahay. Wuxuu ahaa gabey laga soo tiriyay fadhigii Boqor Cismaan. Gabeygu wuxuu jawaab u ahaa gabey Hobyo laga tiriyay oo lagu faduulinayay Boqorka iyo maamulkiisa. Markaas ayaa waxaa ka soo jawaabey Yuusuf Sharmaarke Cismaan (Shan ku-kibir) oo isagu ahaa af-hayeenkii Boqorka Cismaan. Abwaanku waxay ujeeddadiisu ahayd, in uu kala fogeeyo saldanaddii Hobyood iyo qabaa’ilkii cududda u ahaa. Islamarkaas xilligaa gabeyga la tirinayo, waxaa xoogganaa eedaha ay beeluhu ka tirsanayeen maamulka. Gabeyga waa uu dheeraa. Waxaan ka soo qaadaneynaa gaba-gabadii tixihiisa oo ahaa sidan:
§ Hawiye kugu og dhul aad heysatiyo hanadadiisiiye
§ Ciisena hub laga qaadey buu hiif la leeyahaye
§ Kuwii hiilka kuu geli lahaa Cigalle heehawye
§ Mareexaan haraatida ku taal hiirti ma illaawin
§ Ogaadeen hortiiba wow qabeen had iyo laayaane
§ Nacas-yohow rag kuu wada hiq-laad meel la hurudaaye
§ Hamoodyohow xaggow hiran haddaad hiifto boqorkaaga (Shan ku-kibir)
Xilliga barlamaankii Hobyo uu ku jiray dooddii ahayd waan diriri karnaa ee aan dagaalanno iyo ma diriri-karno ee aan is-dhiibno, maamulkii gumeysiga wuxuu ku guda-jiray in uu dhaqan-geliyo qorshihiisii dagaalka. Sidaanu soo xusney waxaa ka go’neyd in uu la wareego gobollada Soomaaliyeed ee maamulkiisa ka maqan, kuwaas oo ay Hobyo ugu horeyso. Ciidamadii soo baxay bilowgii bishii oktoober 1924-kii, waxay lahaayeen saddex madax. Ciidanka 1-aad waxaa hoggaaminayay sarkaal magaciisa la yiraahdo G/ S. De Bello. waxay ka soo baxeen tuulada Mareeg. Ciidankaasi waxay beegsadeen magaalo-madaxdii maamulka (Hobyo). Ciidanka 2-aad waxaa hoggaaminayay sarkaal magaciisa la yiraahdo Gaashaanle Bichis. Iyaguna waxay ka soo duuleen degmada Buulo-berde. Waxay weerareen degmada Ceel-buur. Ciidanka 3-aad waxaa hoggaaminayay sarkaal magaciisa la yidhaahdo Gaashaanle Musso. Waxay ka soo baxeen degmada Beled-wayne. Waxay weerar ku qaadeen magaalada Gaalkacayo. (Taariikhda Soomaaliya, Maxamad Ibraahim Maxamad, 2000, s. 95, Muqdishow – Soomaaliya).
Waxaa xusid mudan degmada Ceel-buur in ay ahayd degmo istraateeji ah oo xaaladdeedu ay ka duwaneyd degmooyinkii kale ee saldanadda ay ka talineysey. Ceel-buur dhankeeda koonfureed waxaa ka soo socdey foofka Talyaanigii Banaadir fadhiyay. Galbeedka waxaa ka degganaa Daraawiishtii oo qalcad ku lahayd Beled-wayne. Daraawiishtu markay ka bexeen Beled-wayne, waxaa meeshoodii buuxiyay ciidankii Ceel-buur fadhiyay. Sidaa darteed, saldanadda waxaa u joogey degaankaas ciidan xooggan iyo rag maqaawiir ah oo degaanka iyo ciidamadiisa ka talinayay. Waxaa kamid ahaa Cumar Samantar, Maxamuud Maxamad Cabdille (Goda-gode) iyo Kadawo Maxamad Cabdille oo walaalo ahaa, Cabdulle Xasan iyo Xaashi Xasan oo iyaguna walaalo ahaa, Xirsi Maxamuud Cali (Guushaa), Geelle Garoon, Faarax-Geeraare Cilmi, Gambool oo isagu ku soo biirey markii ay Daraawiishtu jabtey.
Raggaas waxay kamid ahaayeen rag ka gadoodey maamulka Suldaan cali Yuusuf intuusan Talyaanigu iman deegaanka. Iyagu waxay goor hore bilaabeen in ay qorsheystaan in ay degaanka ka dhisaan maamul ka madax-bannaan midka suldaan Cali Yuusuf. Suldaanku waa uu ogaa qorshahooda.,Magaca “ Fallaago “ oo loo yiqiin wuxuu ahaa mid uu u bixiyay suldaanka. Iyagu waxay odey u doorteen Cumar Samantar oo kamid ahaa saraakiisha magaca wayn ku lahaa saldanadda. Aabihiisna waxay qaraabo ahaayeen Suldaan Yuusuf Cali oo ahaa Cali Yuusuf aabihiis.
Sida aanu soo xusney, maamulkii saldanadda waxaa u muuqatey habacsanaan ayan dagaal la geli kareyn ciidamadan gumeysiga. Suldaankii wuxuu ku qancay go’aankii odeyaasha ee ahaa in ay is-dhiibaan. Si rasmi ah ayay markaas De Vecchi u gaadhsiiyeen in ayan la dagaalameyn ciidamadiisa. Dabadeed Talyaanigii wuxuu u soo dirsadey Hobyo niman hor-dhac u ah xil-wareejinta saldanadda. Kuwaas oo imaatinkoodii ay ku soo gaba-gabowdey saldanaddii uu Hobyo ka asaasey Suldaan Yuusuf Cali Yuusuf, sanadkii 1884-kii. Degmooyinkii ay saldanaddu ka talineysey oo Ceel-buur ay kamid ahayd, waxaa dhamaan la wareegey maamulkii Talyaaniga ee Xamar fadhiyay.
Hobyo waxaa loo soo magacaabay nin la yiraahdo Gian Giamcomo Trivulzio oo horey u ahaa ergey. Isaga iyo dhowr nin oo la socdey waxay la fadhinoqdeen suldaankii iyo xaashaadiisii. Talyaanigii wuxuu markaas awooddiisii soo dhigey deegaanadii ay saldanaddu ka talineysey. Ciidamadii gumeysiga, dib uma ayan dhigan in ay dadka Soomaaliyeed ihaaneeyaan. Saraakiisha iyo askarta Talyaaniga ah waxay ahaayeen kuwo xambaarsanaa aragtidii fashiistiga ahayd ee cunsuriyadda ku dhisaneyd. Iyagu waxay ahaayeen kuwii dhigey hooggii ka dhacay Kelli-asayle oo Soomaalida badan ay ku dhinteen. Inkasta oo deegaanka dadka ku nool uusan u layn sidii uu u xasuuqey dadka reer Banaadir, misana dhibaatooyinka uu Talyaanigu ku soo kordhiyay noloshii deegaanka, maahayn mid yar. Waxaa markiiba muuqatey is-beddelka uu Talyaanigu la yimid ee ah gumeyn, dil, dhac, ciqaab, ihaano iyo falaad-xumi aanan lala gabban. Maxamad Saalax (Ladane) oo xilligaas ahaa wiil yar, wuxuu ka sheekeeyey sidan:
“ Xilligaas waxaan joogey degmada Jiriiban. Waxaa naa’ib ka ahaa odey abti ii ah oo magaciisa la yiraahdo Cali Faarax. Waxaan xasuustaa, goor barqo ah ayaan dhowr sac iyo hal dibi oo aanu lahayn ceelka ka keeney. Dibigii ayaa ciyay. Askari Talyaani ah oo meesha ka ag-dhowaa ayaa intuu bastoolad la baxay, dibigii madaxa ka toogtey. Wuxuu yiri: Ma doonaayo in aan mar danbe maqlo codkaan oo kale Wixii maantaas ka danbeeyey, xoolaha waanu ka fogeyn jirney meelaha ay Talyaanigu joogaan “. (Waxaan ka soo xiganey wareysi aanu la yeelanay Maxamad Saalax Ladane. 23/ 3- 2010. Boosaaso – Soomaaliya).
Degmada Ceel-buur waxaa loo soo magacaabay sarkaal fashiisti ah. Kaasi wuxuu ahaa Dhamme Franco Carole. Isagu wuxuu ahaa dagaalyahan isla-wayn, isla-markaas wuxuu daacad u ahaa nadaamka fashiistiga ah. Dagaal-waynihii I-aad ee uu ka qeyb-galay ayaa dhaawacyo badan ka soo gaadheen. Korkiisa waxaa ka muuqdey dhaawacyo waawayn ee uu ka reystey. Sidaa darteed Soomaalidu waxay u yiqiineen Daldalool. Isagu wuxuu ku dadaaley, dadkii uu ugu yimid degmada Ceel-buur in uu si dhakhso ah isu-baro. Sawirka uu jecleystey in ay dadka ka qaataan wuxuu ahaa, in uu yahay sarkaal adag, arxan-daran, oo aan hadal lagu celin. Sababta waxay ahayd isaga oo horey digniin uga qabay dadka ku dhaqan gobolkan.
“ Wuxuu heystey sheeko ah in dadka ku dhaqan degaanka ay yihiin dad ku nool cimilo qallafsan, ah geel-jir, dagaalka jecel, madax-adag oo aanan la maamuli karin. Dhamme Daldalool markii uu soo degey wuxuu damcay in uu arrintaas tijaabiyo. Wuxuu isugu yeedhay hor-baxa raggii ahaa Fallaago. Wuxuu ku amray inuu ka doonayo: Boqol wiil oo habeen-dhalad ah, kuwaas oo xabkii uu ku yaal. Boqol gabdhood oo habeen-dhalad ah oo xabkii uu ku yaal. Boqol nirgood oo habeen-dhalad ah oo xabkii leh. Boqol waylood oo habeen-dhalad ah oo xabkii leh. Boqol waxarood oo habeen-dhalad ah oo xabkii leh “. (Waxaan ka soo xiganey Cabdiraxmaan Cumar Waesame. 16/ 7- 2011. Dubai – Imaaraadka Carabta).
Qorshaha Talyaanigu wuxuu ahaa in degmada Ceel-buur uu ka dhigto saldhiggii uu kaga duuli lahaa degaanada uu ku sii socdey ee ka xiga dhanka waqooyiga. Sidaa darteed waa ay muuqatey in uu baahi u qabay in degmadan uu gacan adag ku qabto. Xujadaasi laga wariyey odeyaasha, iyada oo ay taagan tahay, ayaa Daldalool wuxuu xidhey saddex nin oo kamid ah maqaawiirtii deegaanka. Xero ay ciidan u degganaayeen dhexdeeda ayuu ku xidhey. Saddexda nin waxay ahaayeen Maxamuud Maxamad (Goda-gode), Xirsi Maxamuud (Guushaa) iyo Geelle Garoon. Sababta keentey xabsiga raggaasi, weli waa lagu muransan yahay. Dadka xiiseeya taariikhda dhacdadan, saddex aragti ayay ka sheegaan. In ay tahay mid ka timid Suldaan Cali Yuusuf, iney tahay mid ka timid Dhamme Daldalool, iyo inay tahay mid ka timid fal ay iyagu ku kaceen. Mid ay ahaatoba, xabsigoodii wuxuu kordhiyay dareenka bulshadii ku nooleyd degaanka.
Qallinka.C/naasir guray Meecaad.
Xigasho,Aqoonyahan Dr Saadiq Eenow.